Iimpawu ze-Oukitel U23 entsha | I-Androidsis
Iimpawu ze-Oukitel U23 entsha
Kwiminyaka yakutshanje siye sabona inani elinyukayo leefemu zaseAsia ezibeka kuthi inani elikhulu leetheminali ezinentsebenzo elungileyo, ethi yona kunye nexabiso layo, Kunzima kuthi ukuba singakhethi nanye kuzo.
I-Oukitel iyaqhubeka ngokusungula izixhobo ezitsha kwintengiso, izixhobo eziqhubeka zisinika amanqaku amakhulu ngaphandle kokulibala uyilo. Kwaye njengobungqina boku, sine-Oukitel U23, indawo elandelayo yenkampani, i-terminal elawulwa ngu-Helio P23 kunye Uyilo lwegradient Ngasemva.
Ihambile loo minyaka apho iitheminali zazifumaneka kuphela ngombala omnyama, ekuphela kwendlela yokwenza ukuba zisebenze kukusebenzisa amaqweqwe. Kule minyaka mibini idlulileyo, sizibonile iinkampani abayikhathaleli kuphela ingaphakathi kodwa nengaphandle. Eyona nto ithengiswayo kwimarike kukusebenzisa imibala ethandwayo, umkhwa owenziwe kuqala nguHuawei kwaye walandelwa yiSamsung, kunye neOukitel eneP23.
I-Oukitel P23 iya kulawulwa yi-MediaTek Helio P23 processor, a iprosesa ethi ii-cores ezisibhozo kwi-2 GHz, iprosesa ehamba kunye ne-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB ukugcinwa kwangaphakathi. Ukulawula lonke iqela, u-Oukitel ukhethe i-Android 8.1 version.
Isikrini se-Oukitel P23 sifikelela I-intshi ye-6.18 ene-FullHD + isisombululo kunye notshi kunye nomyinge wesikrini we-18: 9, esivumela ukuba sisebenzise i-terminal ngesandla esinye ngaphandle kweengxaki. Ngasemva, i-Oukitel isebenzisa i-gradient yemibala esusela emfusa ukuya kohlaza okwesibhakabhaka.
Okwangoku akukho lwazi luvunyiweyo malunga nomthamo webhetri, kodwa kunjalo iyahambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo, Umsebenzi ekufuneka unyanzelekile kuzo zonke iitheminali ezisungulwe kwintengiso namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimpawu ze-Oukitel U23 entsha
Uyenza njani iqela kuWhatsApp. (Hlela kwaye uyiqwalasele)
I-Galaxy Note 9 itshayela i-iPhone XS Max kuvavanyo lobomi bebhetri